Fandaharana IOS 9 manerantany | Vaovao IPhone
Androany no andro lehibe hahatongavan'ny iOS 9 ho an'ny fitaovana iOS rehetra. Tsy maninona ny mpandraharahao, na ny maodely anananao. Tsy maninona na iPad manana taranaka faharoa ianao, na iPad Air 2, iPhone 4S na iPhone 6 Plus, satria ho tonga anio tolak'andro ho an'ny rehetra ny iOS 9. Na dia tsy nanome ny fotoana marina aza i Apple ny fotoana hisian'ny fanavaozana vaovao ny rafi-piasan'ny findainy, matetika i Apple dia mandefa ny vaovao manomboka amin'ny 10:00 maraina amin'ny ora eo an-toerana (San Francisco), ary mahatoky amin'ny fomban-drazany matetika. Amin'ny firy no hanombohana ny iOS 9 amin'ny ora misy anao?
Ny sarintany eo an-tampon'ny lahatsoratra dia manolotra ireo fotoana izay heverina fa ho tonga ao amin'ny firenenao ny iOS 9. Raha atao indray mipi-maso dia ho afaka hahafantatra ianao amin'ny fotoana ahafahanao misintona ny fanavaozana amin'ny iPad sy iPhone anao. Manolotra lisitra anao koa izahay miaraka amin'ireo fandaharam-potoanan'ny tanàna be solontena indrindra an'ny mpamaky anay.
Aza adino fa ireo ora ireo dia manakaiky, ary na dia mieritreritra aza fa ny Apple dia mandefa ny iOS 9 haingana amin'ny fotoana voatondro, Mety maharitra minitra maromaro vao hiseho ao amin'ny iTunes na amin'ny fitaovanao hanavao amin'ny alàlan'ny OTA. Azo inoana koa fa ireo izay mandefa avy hatrany hanavao ny fitaovany dia hahita fa miadana be ny fampidinana ny fisie system, satria hisy mpampiasa an-tapitrisany izay hisintona miaraka ary tsy misy mpizara afaka manohana azy.
Mampatsiahy anao izahay alohan'ny fisintomana sy fanavaozana jereo ireo lahatsoratra ireo mba tsy hanenenana olana:
Ahoana no hiomanana amin'ny fanavaozana ny iOS 9
Ahoana ny fanavaozana ny iOS 9
Hampahafantatra anao haingana eo amin'ny bilaogy izahay rehefa misy ny fisintomana iOS 9.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Famelana ny fandaharana IOS 9 manerantany
Zavatra 5 mety tsy fantatrao momba ny iPhone 6s
IOS 9 dia mamoaka ny fotoana manerantany